Akụkọ - Akụkọ ihe mere eme nke villa nchara na-adịghị mma n’ụlọ na mba ofesi
N'oge na-adịbeghị anya, n'ahịa ụlọ wụpụrụ "ọkụ nchara villa villa", ihe ọhụụ a emeela ka ọtụtụ ndị mmadụ toaa ntị. Igwe ụlọ nchara pụtara na China na 1990s. Taa, teknụzụ nke ụlọ eji arụ ụlọ tozuru oke, mba ahụ na-akwalite, ma ọ banyela n'ọhụụ ọha na eze. Yabụ mba ndị mepere emepe si wee rụọ ụlọ? N'ihi mmụba nke mmata gburugburu ebe obibi na ụkọ osisi na ihe ndị ọzọ, ọtụtụ mba dịka United States, Japan, Britain, Australia, na-agbasi mbọ ike itinye ngwa na mmepe nke obere ụlọ ndị na-acha ọkụ ọkụ.
N'ihe dị ka afọ 1960, Australia wepụtara echiche nke "ntinye ngwa ngwa nke ụlọ ewubere", mana n'ihi na ahịa ahụ etobeghị, emebeghị ya nke ọma. N’afọ 1987, arụpụtara nnukwu ihe siri ike kpụkọrọ akpụzi dị ka ihe arụ siri ike, ma nkọwapụta nkwonkwo nke Australia na New Zealand, dịka / nzs4600 siri ike mebere igwe, wepụtara ma tinye ya n’afọ 1996. steeldị nchara a nwere ikike dị elu. E jiri ya tụnyere otu ike ibu osisi, ọ bụ naanị 1/3 nke ibu nke osisi. Elu kpaliri. N'okpuru ọnọdụ nke enweghị mgbanwe ọ bụla, ogologo oge nwere ike iru afọ 75.
Steellọ ndị e ji ígwè rụọ na-eto ngwa ngwa na United States. Na 1965, ụlọ ndị na-eto eto nwere nanị 15% nke ahịa ụlọ na United States; Na 1990 ọ rigoro ruo pasent 53, ebe na 1993 ọ rigoro ruo pasent 68 na site na 2000 ọ rigoro ruo pasent 75. Nhazi, usoro ihe omuma, iche iche, ahia na mmekorita nke ihe ndi ozo na ihe ndi ozo bu ihe dika 100%. Mgbazinye igwe akụrụngwa, akụrụngwa na akụrụngwa dị iche iche mepere emepe, na ogo azụmaahịa ruru 40%.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ nchara igwe nchara ọkụ nke nwere kpụrụ akpụ bụ usoro ihe owuwu ọhụrụ nke na-eto ngwa ngwa na Europe na America. Ọ na ọtụtụ-eji Villas, ụlọ, sinik tụrụ, ụlọ ọrụ klọb, ụlọ akwụkwọ, n'ụlọ ọgwụ, azụmahịa ụlọ na na. N’Australia, a na-ewu ụlọ ruru nde $ 600 nke ọkụ nchara keel ụlọ dịpụrụ adịpụ kwa afọ 120,000, na-ede ihe dịka 24% nke uru ahịa azụmahịa niile na Australia; Na America ọnụ ọgụgụ ụlọ ndị e wuru site na iji usoro a si na 55,000 n'etiti 1990s ruo 325,000 na 2000. Ka ọ dị ugbu a, ụdị ụlọ ọkụ a na-acha nchara aghọwo ụdị usoro ụkpụrụ ụlọ kachasị na mba ndị mepere emepe.